Sida loo Download Music ka Spotify in Lugood on Windows iyo Mac
> Resource > Beddelaan > Sida loo Download Music ka Spotify in Lugood ee Windows iyo Mac
Spotify waa mid aad loo jecel yahay. Dad badan waxay jecel yihiin in ay u soo booqdaan si ay u helaan in ay malaayiin heeso. Laakiin waa dhibaato si ay u soo booqato oo mar kale ka raadi isla heeso iyo mar kale, soo maaha? Fursadda in aad rabto in aad kala soo bixi durdurrada music ka Spotify.com u sahlan loo maqli karo, xitaa offline. Xalka aad u malaynayso in waa inay muusikada ka Spotify in Lugood. Waa hagaag, sida loo sameeyo?
Haddii aad tahay mid ka mid ah oo doonaya in ay soo bixi heeso ka Spotify maktabadda Lugood, aad nasiib halkan. In this article, waxaan soo bandhigi doonaa qalab hal-click inuu kaa caawiyo inaad dooxi ka Spotify iyo badbaadin aad jeceshahay music dhan Spotify ee tayada audio weyn. Markaas, iyadoo mid ka mid click, waxaad yeelan doontaa in ay u gudbiyaan oo dhan Spotify files audio si toos ah u maktabadda Lugood, xitaa MP3 ciyaaryahan aad sida iPod, iPhone iyo iPad iwm
Waxay yihiin TunesGo iyo Streaming Auido taariikhqorihii ( AllMyMusic for Mac ). Just download version saxda on your computer oo ay leeyihiin isku day ah. Hoos waxaa ku qoran tilmaan faahfaahsan oo ku Windows (ama guji halkan si aad u hesho tilmaan-users Mac ').
Si toos ah kala soo bixi Spotify music leh tayo wanaagsan
Caqligiisu aqoonsan song info
Bedelka music Spotify in Lugood leh hal click
Download playlists Spotify joogto ah
Sida loo isticmaalo Wondershare Streaming Audio Recorder in Download Spotify in Lugood
Tallaabada 1 Ku rakib oo ay maamulaan Downloader Spotify ah
Download barnaamijkan ka link ee kor ku xusan oo ku xidh. Ka dib markii la rakibey, uu u bilaabi si ay u helaan diyaar.
Tallaabada 2 Start in dooxi music ka Spotify
Ka dib marka aad abuurtaan Spotify in Lugood Converter this smart, aad u baahan tahay si ay u helaan Spotify.com ka dibna heli music Spotify aad rabto in lagu wareejiyo si Lugood. Marka aad hayseen doortay mid ka mid sax ah, waxaad u baahan tahay riix cas Record button on dhinaca kore ee bidix ee interface ugu weyn this app ee. Markaas dib ugu soo laabtaan website ay ku ciyaaraan music Spotify internetka. Isla markiiba, waxaad ka arki kartaa Spotify in Lugood kala iibsiga waxaa laga bilaabo si ay u qoraan music Spotify ah, oo la soo bandhigay cod maqal ah garaaf spectrum. Marka duubo la sameeyo, waxaad ka heli kartaa file MP3 Spotify ah maktabadda this app ee. Haddii loo baahdo, waxa kale oo aad joojin kartaa habka lagu qoro inta aad mar kale riix "Record" button.
Tallaabada 3 Beddelaan Spotify in Lugood
Hadda, waxa aad bilaabi kartaa in ay ku wareejin ah music soo bixi Spotify in Lugood ururinta ama u hagaagsan Spotify in iPod, iPhone ama iPad ka dib. Si aad u sameyso, waxaad xaq u riixi kartaa Spotify wadada audio in ay maktabada iyo doortaan Add to Lugood doorasho.
Fiiro gaar ah: Si loo hubiyo music Spotify gebi ahaanba lagu duubay iyada oo aan la kala gooyey, waa in aad music Spotify ciyaari habsami-socodka ah ee wax lagu qoro.